Ndinotumira Sei Kambani Yangu Hemp Interstate? | Kuendesa hemp
Kuendesa Hemp Zviri Pamutemo
Ndinotumira Sei Kambani Yangu Hemp Interstate?
Gurukota rekurima re 2018 rinopa pachena kutumira kweiyo hemp, asi hazvireve kuti komisheni yenyika inokoshesa musiyano uripo pakati peye mutoro we cannabis kubva kune uyo une zvinopfuura 0.3% THC. Vanhu vachiri kusungwa nekutakura hemp ruva uye distillates zviri pamutemo.
sei kutumira hemp ruva
Isa aya mashanu mashanu pane yako rondedzero yekutumira hemp interstate.
tsamba (cherechedzo) kumatare edzimhosva.
imbwa dzinodhaka hazvigoni kuudza mbanje kubva kuhemp
COA inoratidzira iyo hemp
rezenisi uye kunyoreswa kuve nacho
kutyaira kwakanaka uye kwakachengeteka.
Isu tinokurukura Kutumira Hemp zvakachengeteka uye kufukidza izvo zvataurwa pamusoro, izvo zvakare zviri muvhidhiyo. Rombo rakanaka kune kambani yako neyemp yake yekutumira. Bvunza a gweta rehemp nezve bhizinesi rako kuve nechokwadi chekudzivirirwa kubva panjodzi dzekufambisa.
Ronga Kutumira Kwekambani Yako Nekuchenjera
In 2019, hemp ndeye federally zviri pamutemo asi kwete pasina chero mutemo. Kurimwa kweHemp uye kugadzirisa kunoda kutevedzera pamwe nemirairo yemubatanidzwa kubva kune yakapfuura Hemp Pilot chirongwa, kana mumwe mutemo wenyika unobvumidza kurimwa kwehemp. USDA ine kusvika 2020 yekuburitsa yayo yekupedzisira hemp mirairo. Misika yemakemendi eHemp haina kukura zvakakwana.
Mwaka wekukura wa 2019 uchave wakanyanya kukura muUnited State mumakumi emakore. Hemp kutumira kunouya, uye mutemo unokwanisa kuvhiringidza chirimwa icho chisiri pamutemo mbanje. Heano maitiro ekuti hemp yako isvike kwairi zvakanaka.
Iva neChirongwa Chekutumira Hemp
Dana chirongwa, kana maitiro ekambani, iyo hemp kutumira haina kufanana nekutakura zviyo nekuti maCAP anga asiri kudhonza pamusoro pemitoro yezviyo kwemakore makumi masere apfuura.
Chirongwa chako chinofanira kusanganisira nzira dzekufambisa dzekutakurisa hemp uye runyorwa rwakanyorwa zviri pachena nezvechinjana. Tsamba kuvakuru vemitemo inokwanisa kupa kujekesa pamusoro pemutemo mutsva nekupindura mibvunzo yavo.
Tarisa uone kune Mutemo Kusimbisa kweHemp Shipment
Tsamba yakanaka yekumanikidza mutemo icha:
taura mutemo wemubatanidzwa nezve hemp
taura mutemo we federal nezve interstate hemp kutumira
Cite mutemo wenyika unobvumidza zviitiko zvekambani yako
taura izvo hemp's zvitupa zvekuongorora (COA)
tsanangura zvinodhaka imbwa dzine nhema dzakasviba kunyevera nekuda kwe terpenes mu hemp
ipa ruzivo rwekuonana negweta rako.
Imbwa Dzemishonga Dzisingashande neHemp Shipments
Iyo kemikari iyo inoita cannabis iyo isiri pamutemo mbanje ndeye cannabinoid inonzi Delta-9 THC, kana dzimwe nguva yakapfupiswa kusvika THC chete. Imbwa hadzigoni kunhuhwirira ichi kemikari nekuti haonhuhwirira. Pane kudaro, imbwa dzinodhaka dzinodzidziswa kuputa kune mamwe ma terpenoids mune cannabis chirimwa. Aya terpenoids akajairika mune chero hemp kana mbanje. Hezvino zvakanyanya zvakajairika terpenes zvinowanikwa mu hemp.
Iwo terpenes ndosaka munhuwi uye zvinwiwa zve hemp, kana mbanje, zvine kusiyana kwakadai. Idzi imbwa dzinodhaka dzinonhuwira kwevaviri chete terpenes. Imbwa dzinodhaka dzinonhuwira beta-caryophyllene. zvakananga, imbwa dzinodhaka dzinonhuwira Caryophyllene oxide, ndiyo inokonzeresa kuchenesa cannabis, nekuti caryophyllene ndiyo yakajairika terpinoid.
Imbwa dzezvinodhaka zvakare dzinonhuwirira Pinene, kana oxides yayo, nekuda kwemaitiro akajairika pini ye cannabis uye kana yasanganiswa ne caryophyllene, mhedzisiro inowanzo kazhinji cannabis - asi cannabis inosanganisirawo hemp.
Iva nezvitupa zveAdvanced neHemp Shipment
Chitupa chekuongorora (COA) ivimbiso yakaitwa nenzvimbo yekuyeresa nezvezvakangoita mu hemp yakaedzwa. Nyika dzinowanzo bvumidza nzvimbo dzekuongorora dzinobata kuyedzwa kweiyo hemp yemaindasitiri kuitira kuti hurumende isavhaye vashandi vazhinji Aya makambani ekuyedza anoongorora cannabis yako, ingave hemp kana mbanje, uye vanopa COA yezviri mukati mayo. Yese kemikari mbiri ye cannabis chirimwa chinofanira kupihwa pane COA, asi heino pfungwa huru dzavanoda kusanganisira:
Kambani iyo yakaita bvunzo yeLab
Iyo lab ndeye kambani yechitatu kubva kumurimi
cannabinoid mbiri yeiyo hemp
terpene profile (mabhonasi mapoinzi)
Anorema Metal Analysis
Yakakodzera hemp kutumira kunoda kuve neyakazvimirira yechitatu bato COA ine hemp kutumira pachayo. Tsamba yekumanikidza mutemo inofanirawo kusanganisira iyo COA sechiratidziro chekuenderera mberi kudzidzisa nekugadzirisa chero kuvhiringidzika kudzikisa mukana wekutakurisa kwehemp ..
Ronga Yako Hemp Shipping Route
Iyi ndiyo pfuma kubva vhidhiyo iyo inokupa iwe mepu mune ruvara kuti uone izvo anoti anotendera hemp uye vanoda avo havaite.
Rangarira, akawanda ekusungwa haangoitika muIdaho, kana Iowa, kana isiri-hemp state. Kunyangwe nyika dzicharatidza zviri pamutemo hemp mitemo yakavhiringidza mutemo nekukonzera kusungwa zvisina kufanira. Zvimwezve chikonzero chekuva nechirongwa, pepa faira rako rekufambisa, uye zvakare ..
kutumira hemp hakuna njodzi mahara
Dhiraivha Smart & Yakachengeteka Paunenge uchitumira Hemp
Izvi zvinoshanda pasina kutaura, asi zvichiri kutaurwa. Iva nemutyairi akakodzera. Tarisa uone ese anotendeuka masaini uye matare emwenje. Dzivisa chero mukana usina kukodzera wekuti udhonzwe pamusoro - kana kupinda mutsaona. Usatumira mameseji uye uchityaira. Usanwa uye uchityaira. Usatyaire marezinesi apera… uye zvichingodaro. Iva Smart kana hemp ichiendesa.
Rombo rakanaka kukura yako itsva hemp chirimwa.
Uye fona kana iwe uchida kutaura nevamiriri vedu pane yako hemp venture. Kutenda uye kunzwa wakasununguka kugovera izvi kana iwe wakawana kukosha kubva pazviri.